Shabaab oo tafaasiil ka bixiyay dagaalkii tooska ahaa ee ay la galeen Ciidanka Mareykanka – STAR FM SOMALIA
Afhayeenka Ciidamada Ururka Al Shabaab, Sheekh C/casiis Abuu Muscab, ayaa waxaa uu faah faahin dheeri ah uu ka bixiyay dagaalkii, ay hal habeen ka hor Ciidanka Mareykanka kula galeen Deegaanka Toora Toorow Ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Afhayeenka, ayaa waxaa uu sheegay in ciidan ay ku tuhmayaan kuwa Mareykanka inay soo qaadeen weerar iyaga ka dhan ah, isla-markaana ay ku fashiliyeen meel 2km u jirta Deegaanka Toora Toorow. Wuxuu sheegay in markii hore ay diyaaradaha kaga soo daggeen meel 6km u jirta Deegaankaasi.
Afhayeenka, ayaa tilmaamay inaysan Ciidamada Mareykanka u suurta-gelin inay gudaha u soo galaan Toora Toorow, ka dib markii uu sheegay in halka loo yaqaano Warta ay ku celiyeen Ciidankaasi.
Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo la hadlay Idaacada Andalus, ayaa intaa ku daray in Ciidankaasi ay wateen laba helicopter, ayna dib ugu laabteen diyaaradahaasi, xilli sida uu sheegay ay weerarka fashiliyeen.
Wuxuu ku faanay in Xoogaga Ururka Al Shabaab ay u diyaarsanaayeen ka hortagga weerarkaasi, isla-markaana ay Ciidankaasi dib ugu laabteen Garoonka Balli-doogle, oo sida uu ka dhawaajiyay lagu soo diyaariyay weerarka.
Mar uu ka hadlaayay khasaaraha ka dhashay dagaalka, ayuu sheegay inay ogyihiin oo qura dhaawaca haweeney da’ ah, oo ka tirsan dadka reer Toora Toorow, iyadoo uu meesha ka saaray in dhankoodu uu wax khasaara ihi ka soo gaaray dagaalka. Sidoo kale waxaa uu bidhaamiyay inaysan waxba kala socon haddii uu jiro khasaaro soo gaaray Ciidanka Mareykanka iyo haddii kalaba.
Abuu Muscab, ayaa ku cago jugleeyay haddii ay weeraradan sii socdaan inay ku qabsan doonaan diyaarado, gacantana ay cadowga kaga dhigi doonaan askar nool, sida uu yiri.
Dhanka kale waxaa soo baxaaya warar sheegaaya in Ururka Al Shabaab ay Deegaanka Toora Toorow ku hayeen dad ajaaniib ah, taasina ay ka dambeysay weerarka habeenka madow lagu qaaday.
Ciidamada Mareykanka ka joogga Somaliya oo kaashanaaya Ciidanka Kumaandooska Somaliyeed, ayaa waxay billihii ugu dambeeyayba wadeen hawlgalo xilliga habeenkii ah, kana dhanka ah mintidiinta Al Shabaab.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran oo howl gal ka sameeyeen Galgaduud